192.168.2.1 username & Password ကို - 192-168-1-1l.com
ဇန္နဝါရီလ 9, 2019 Denial245
192.168.2.1 router ရဲ့ Web-interface ကိုအထဲသို့ဝင်ခြင်းရန်အသုံးပြုသည့်လူကြိုက်အများဆုံး IP လိပ်စာများတစ်ခုဖြစ်သည်. ဤ 192.168.2.1 IP address ကိုလေ့အချို့ router များအသုံးပြု.
သင်တစ်ဦးထုတ်လုပ်သူကနေ Router ကဝယ်ယူလိုက်တဲ့အခါ, ဒီလိပ်စာကိုအသုံးပြုဖို့အရာ, က default IP address ကိုကြောင်းကိုသေချာစေပါ 192.168.2.1, ဒါပေမယ့်စိုးရိမ်ကြဘူး - သငျလျင်မြန်စွာတစ်ဦးထက်ပိုသောသင့်လျော်သော IP address ကိုသတ်မှတ်နိုင်သည်.
အဆိုပါ 192.168.2.1 အမျိုးမျိုးသော router များများအတွက် default အနေနဲ့ IP address ကိုထားဖြစ်ပါတယ်, ကနေအားလုံးနီးပါးမော်ဒယ်များအပါအဝင် Belkin နှင့်ထံမှအချို့သောမော်ဒယ်များ Siemens, Edimax, နှင့် SMC, သို့သော်, ဒါကြောင့်ပြောင်းလဲသွားနိုင်ပါတယ်.
ဘယ်လိုဝင်မည်နဲ့ Setup Belkin wireless router မှအသုံးပြုခြင်း 192.168.2.1?
➥ အဆိုပါကွန်ပျူတာသည်တစ်ဦးကိုချိတ်ဆက်4Lan သို့မဟုတ်ကြိုးဆိပ်ကမ်းများ
➥ သို့ပြုလျှင်သင်၏မည်သည့် web browser ကိုဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့် Enter http://192.168.2.1 ဝဘ်ဘရောက်ဇာရဲ့လိပ်စာဘားသို့.
➥ တစ်ဦးက router ကိုရဲ့ login screen ကိုရောက်လာသင့်တယ်, ထို့နောက်ရဲ့ login button ကို click နှင့်တင်ပြရန်ခလုတ်ကိုစကားဝှက်ကိုအလွတ်နဲ့ကလစ်နှိပ်ထားခဲ့ပါ.
➥ Next ကို, channel ကိုအပေါ်ကြိုးမဲ့ setting ကိုကလစ်နှိပ်ခြင်းနှင့် SSID သို့ Button လေးအောက်မှာ
➥ထိုအခါ SSID သို့ Box မှာ NetVN_2.4G နှင့် NetVN_5G ရေးနှင့်အပြောင်းအလဲများကိုလျှောက်ထားခလုတ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ.
လုံခြုံရေးခလုတ်ကိုပြောင်းလဲခြင်း password ကိုအပေါ်➥ Next ကိုကလစ်.
➥ Next ကို, အင်တာနက်က WAN Button လေးအောက်မှာ Dynamic option ကိုအပေါ် Connection ကိုအမျိုးအစားနှင့်အမှတ်အသားပေါ်တွင်ကလစ်နှိပ်ပါနဲ့နောကျ button ကို click.
➥ထိုအခါအမည်အမျိုးအစား Host NetVN_Belkin နှင့်စသောအပြောင်းအလဲ Apply button ကို click.
ဝင်မည်နဲ့ Setup Belkin wireless router ဗီဒီယို
ဤတွင်ဒီအောက်တွင်ဖော်ပြထားသောဗီဒီယိုထဲမှာ, သင် Belkin wireless router ဝင်မည်နဲ့ Setup ပြည့်စုံမှုလုပ်ငန်းစဉ်ရနိုင်, ဒါကြောင့်ဒီဗီဒီယိုကိုကြည့်ရမယ်.
သမျှသောအကြောင်းကိုခဲ့သည် 192.168.2.1 IP Address ကိုပုံမှန် Router အသုံးပြုသူအမည် & Password ကို. ငါသည်သင်တို့ကိုဒီ post နဲ့တူယောက်ျားတွေမျှော်လင့်, ဒါပေမယ့်သင်ဤ post ကိုနှင့် ပတ်သက်. မည်သည့်ပြဿနာနှင့်ရင်ဆိုင်နေရပါလျှင်, ထို့နောက်ကျွန်တော်တို့ကိုမှတ်ချက်ပေးရန်ကျေးဇူးပြုပြီးကျွန်တော်တတ်နိုင်သမျှအမြန်ဆုံးသင့်ရဲ့ပြဿနာကိုဖြေရှင်းနိုင်ဖို့ကြိုးစားပါလိမ့်မယ်, ကျွန်ုပ်တို့၏ site သွားရောက်လည်ပတ်မှုအတွက်ကျေးဇူးတင်စကား.
ယခင် Post မှ:192.168.1.254 router ဝင်မည်
next Post:10.0.0.1 login အဒ်မင်